जीवनको ज्यान बचाउन जुटौं - Terhathumkhabar::TerhathumKhabar||तेह्रथुम संचार विकाशको लागी हाम्रो पहल
बिहि, पुस २१, २०७३
लगभग जीवनको एक तिहाई आयु पुरा गरेका यी घाइते नेपाली जीवन रानाको अवको बाँकी जीवन कसरी बित्ने होला ? १६ महिनाको छोरो र उमेरदार श्रीमती, बाबुआमा, दिदी बहिनी र भाईको अभिभारा बोक्ने एक बाबु, श्रीमान, जेठो छोरो, दाई र भाई यसरी परदेशको अस्पतालको शैयामा उपचारबिहिन भएर लड्नु परेको कहानी दिनहुँ बिभिन्न अनलाइन समाचारहरुमा पढ्नुपर्दा उनीहरुको मन कति कुँढिएको होला ? कति रोएको होला ? १६ महिने छोरोको ‘बाबा बाबा’ भन्ने तोतेबोली सुनिदिने बाबा अस्पतालको शैयामा कति पिडादायी छ जीवन ।
यी हुन झापा सुरुङ्गाका जीवन राना, जो जीवनको संघर्षमा अस्पतालको शैयाबाट सहयोगको याचना गर्दैछन । युएईमा रहेका धेरै संघसंस्थाहरुको परिक्षाको घडी पनि यही नै हो । एनआरएनए, युएईको अगुवाईमा सहयोग संकलन अभियान चल्दै गरेको पनि छ । बिभिन्न संघसंस्थाहरुले यो अभियानमा हातेमालो गर्लान कि नगर्लान त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । केही राजनीतिक दलहरुको आपसी इश्र्या, ‘ईगो’ यसमा पनि नहोला भन्न सकिन्न । ‘तँ ठुलो कि म ठुलो’ भन्ने प्रतिस्पर्धाको बाछिटा यता पनि नपर्ला भन्न सकिन्न । अहिलेसम्म राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरु मौन देखिएका छन । आफुलाई ठुलो संगठन भनेर दाबी गर्ने, मेरो संगठनमा दुईचार सय पार्टी सदस्यता छ भन्दै दाबी गर्नेहरु लगभग दुलो भित्र लुकेर बसेका देखिन्छन । अझ केही केहीले त सामाजिक सञ्जालमा सहयोग गर्ने लिष्टमा मेरो संगठनको नाम किन लेखेको भन्दै प्रश्न पनि तेर्स्याएको देखियो ।